माटोको जोडाइमा ढुंगाको घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी कसरी बनाउने ? » Khulla Sanchar
माटोको जोडाइमा ढुंगाको घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी कसरी बनाउने ?
भदौ ९, २०७३
माटोको जोडाइमा ढुंगाको घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन मुख्यतया, निर्माण स्थलको छनौट र माटो परीक्षण पहिलो काम हो । त्यस्तै भवनको आकार प्रकार र नाप कस्तो कति राख्ने भन्ने विषयमा पनि पहिल्यै निक्र्यौल गर्नुपर्छ । यस्तै निर्माण सामग्रीहरु जस्तै ढुंगा, माटो, काठ, डण्डी जस्ता कुराहरु कमसल प्रयोग गर्नु हुँदैन । माटोको जोडाइमा ढुंगाको घरको जग लगाउँदा गारोवाला जग लगाउनर्ुपर्दछ । माटो अनुसार जगको न्यूनतम नाप तोकिएको हुन्छ ।
यस्तै गारो लगाउँदा गारोको अधिकतम लम्बाइ, उचाइ, प्यानल साइज र न्यूनतम मोटाइमा ख्याल गर्नुपर्छ । गारोको न्यूनतम मोटाइ ३५० देखि ४५० मिलिमिटरसम्म हुनुपर्छ। यदि गारोको लम्बाइ धेरै लामो भयो भने आड दिने गरी छुट्टै गारो उठाउनुपर्छ जसलाइ अंग्रेजीमा बट्रेस भनिन्छ । यस्ता गारो ३ मिटरभन्दा टाढा राख्नु हुँदैन । यसको न्यूनतम मोटाइ मुख्य गारो बराबरको हुनुपर्छ र आधारको न्यूनतम चौडाइ गारोको उचाइको ६ भागको १ भाग हुनुपर्छ। साथै माथिको चौडाइ कम्तीमा गारो बराबर हुनुपर्दछ। चुली गारोले गारोको उचाइ बढाउने हुँदा सकेसम्म काठ वा जस्ता पाताको हलुका चुलीगारो राख्नुपर्छ।
माटोको जोडाइमा ढुंगाको घर बनाउँदा झ्याल ढोका राख्दा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। झ्याल र ढोका गारोको कुनाबाट कम्तिमा ६०० मिलिमिटर टाढा राख्नुपर्दछ । झ्याल ढोकाको बीचमा कम्तिमा ६०० मिलिमिटर गारो लगाएको हुनुपर्छ । झ्याल ढोकाको लम्बाइ बढीमा गारोको लम्बाइको ३० प्रतिशत हुनुपर्दछ ।
ढुंगाको गारोमा ठाउँ ठाउँमा पुरै गारोका चौडाइ भरिको कैँची मार्ने ढुंगाहरु राखिएको हुनुपर्छ। दूइवटा कैँची मार्ने ढुंगा बीचको फरक तेर्र्सो पट्टी ४ फिट र ठाडो पट्टी २ फिट भन्दा बढी हुनुहुँदैन । यदि कैँची मार्ने ढुंगा गारोको चौडाइ जत्रो नपाइएमा कम्तीमा गारोको ३ चौथाइ लामो ढुंगा एकआपसमा खप्टाएर राख्न सकिन्छ । सूर र जोर्नीमा ठूलो चाक्लो ढुंगाको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
भवनमा जग, जगको माथिल्लो सतह, झ्यालढोकाको तल्लो र माथिल्लो सतह, चुली गारोको भिरालो सतह, भुँइको सतह र छानाको सतहमा पुरै गारोभरि तेर्र्सो पट्टीहरु दिनुपर्दछ । सुर र जोर्नीमा उचाइतर्फ ५०० देखि ७०० मिलिमिटरको दुरीमा स्टिचको प्रयोग गर्नुपर्छ । ढलानको तेर्र्सो पट्टी नपाइएको खण्डमा काठको पट्टी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
झ्यालढोकाको कमजोर ठाउँहरु जस्तै जोर्नी, कुना र झ्यालढोकाको छेउमा ठाडो फलामे डण्डीहरु हाल्नर्ुपर्दछ । ठाडो फलामे डण्डीहरु जगबाट सुरु भई छानाको सतहसम्म जानुपर्छ। ठाडो फलामे डण्डी नपाइएको खण्डमा ठाडो काठ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै छाना लगाउँदा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ लचकदार छाना लगाउनुपर्दछ ।